Andasibe: Oronantsary iray momba ny fandripahana ala eto Madagasikara (Tapany 1) - Lemur Conservation Network
Raha te hianatra momba ireo varika
You are here: Home › Andasibe: Oronantsary iray momba ny fandripahana ala eto Madagasikara (Tapany 1)
Andasibe: Oronantsary iray momba ny fandripahana ala eto Madagasikara (Tapany 1)
By Fabiola Holiniaina Kjeldgaard on juillet 1, 2017 in Bilaogy
« Ity lahatsoratra ity dia dika tenin’ilay bilaogy nosoratan’i Denise sy Marc Dragiewicz izay mpiara-mitantana ny famokarana ilay sarimehitsika/oronantsary iray izay notanterahina tamin’ny faritr’i Andasibe iny. Izy ity moa izany dia mijery manokana ihany koa ireo ezaka izay ataon’ny mponina eny ifotony manoloana ny fiarovana ireo gidro/varika sy ny ala. »
Roso ny dia- Ela niandrasana, fa tonga ihany ilay fotoana izay nandrasanay, dia ny fikasanay mivady ny ho an’i Madagasikara mba hanao orinantsary momba ny fahasimban’ny tontolo iainana any an-toerana. Nanomboka ny fiandohan’ny volana Desambra 2013 ny fanantontosana ilay orinantsary.
Noho ny teti-bolanay izay somary nanify sy azo lazaina ho tery dia tapa-kevitra fa handeha amin’irony fiara fitanteram-bahoaka irony izahay- izay mor avidy no mahomby fa saingy kosa somary kely aina ilay fiara. Zara raha nisy toerana nipetrahana sy nisisihanay mivady noho ny habetsak’ireo mpandeha ho any Andasibe. Claude, izy no mpitari-dalana voalohany izay nifanojo taminay ary mailaka ery izy nanontany raha toa ka manana eritreritra ny hampiasa azy izahay mba hitondra anay hitsidika ny ala sy parkan’ i Andasibe. Raikitra ary ny asa, ary ny ampitso maraina vao mangiran-dratsy dia indro izy niandry anay teo amin’ny fidiran’i calan-javaboary Andasibe.
« Ny faritra atsinana no voalohany notsidihanay. Variana ary hatairana ny anay naheno ny hiran’ireo » Indri-Indri) izay nanako manerana ny ala, amin’ity andro vao mangiran-dratsy. Vao nandingana ivelany ny varavaran’ilay trano fandraisam-bahiny nipetrahany izahay, raha handeha ho any amin’ny trano fisakafoanana dia nahita tanalahy maintso iray izay nandry teo ambany rantsankazo. Nahita bibidia hafa toy ny Sifaka ihany koa izay, izay teny ambon’ireo hazo izay tsy dia lavitra fa tena akaiky tokoa an’ilay trano fandraisam-bahiny izay nivantananay tao anatin’ny ilay valan-javaboahary. »
Ny afak’ampitson’ny nahatongavanay teto Andasibe dia nitondran’i Claudempitari-dalana iray hafa, izahay. i Nirina. Nirina moa dia ankoatrin’ny mpitari-dia azy dia mpandrindra ny fandaharan’asa fiarovana ny ala eo an-toerana ihany koa. Tao aorian’ny andro faharoa izay notsidihanay ny valan-javaboary, dia mba naka aina kely izahay satria tena vizaka. Fiatoana fohy ihany naefa izany satria fotoana mba nankafizanay sakafo antoandro tany anaty ala. Raha sendra variana naka aina tsara, nadrindray teny ambony bozaka maintso maivana iny Nirina, dia indro fa nisy karazana gidro/varika hafa izay somary mena kibo tonga ary tsy naka sarotra fa tonga nilalao teo amboniny. Tao aoriana kelin’io duia tamy ireo mponina sansatsany teo an-toerana nhira vakon-drazana izay mitantara y fifandraisan’ireo olombelona voalohany tonga nonina teo an-toerana amin’ireo zavaboary. Tsikaritrasy tsapa tao anatin’izany fa dia nisy firindrana lehibe tokoa teo amin’ny vahoaka Malagasy sy ny tontolo voajanahary.
Fantatray avy hatrany fa I Nirina dia olona tso-po sy tsara toetra izay mahafoy ny fotoanany hanentanana ireo mpiara-belona syny fiaraha-monina mba hitsinjo sy hiaro ny tontolo iainana.
Nanomboka nanodina ilay orinantsary izahay ary i Nirina no naokatra izany, naraina feonkira izay kanto dia kanto tokoa, sodina nostofina an-kalamanjana, teny an-dalambe. Nanomboka ny fanadiahdiana ary nandritra ny resaka nifanaovana tamin’ny fiaraha-monina dia nilaza izy ireo fa manantena fatratra fa hanomboka handray ny andraikiny ny governomanta ary hanasazy ireo maimba ny tontolo iaianana.
Nohazavain’i Nirina taminay ihany koa fa raha lasa valan-javaboary ny ala na faritra iray, dia midika izany fa tsy ho tsy ara-dalàna itsony avy eo ny fakàna sy fitrandrahana loharanon-karena voajanahary avy ao. Nanomboka ary marisika sy vitrika ery izy amin’ny fiarovana ireo vondrona « Indri- Indri » tavela ary monina ao anatin’ny faritra. Mampoiriska ny olona ihan ykoa ny tenany mba hiaro ny tontolo iainanasatria dia harena sy vintana ho an’ny Malagasy ny fananana izany.
Nitohy ny dianay ary nony tonga teo amin’ny tanànan’i Ambavaniasy dia nijanona mba hiresaka amin’ny zatovovavy iray mipetraka eo an-toerana izay mpanao asa tanana. Nanazava moa ny tenany no sady nanondro ny manodidina ary nilaza fa simba ny ala nisy teny an-toerana noho ny fanaovan tavy. Ny fambolena amin’ny alalan’ny tavy, araka ny filazany moa dia anisan’ny loza izay mitatao ary mety handripaka ny ala eny amin’ny faritra.
Nitohy ny resaka nifanaovana tamin’ireo olona mpikambana ao amin’ity fikambanana ity izay mandray na-tànanà ny fandaminana sy ireo antsipirahany rehetra mikasika ny tany , fambolena sy ireo mpanetsa. Rehefa avy nihaona tamin’ireo mpikarakara ity vondrom-piarahamonina ity ala, izahay dia hitodi-doha hihaona indray amin’i Claude. Betsaka ireo vaovao momba ny tontolo iainana eo an-toerana, ny olana maro isan-karazany eo anivon’ny fiaraha-monina izay mijaly noho tokoa mandritra ny vanim-potoana maina ary ihany koa mizaka ny tsy erany mandritra ny vanim-potoanan’ny orana izay mateitika arahina rivo-doza isan-karazany.
Hita ary fa tena mandray andraikitra tokoa ny firaraha-monina eny an-teorana amin’ny alalan’ny fambolen-kazo mba hiarovana ny tintolo iaianana. Ankoatra izany, dia manana eritreritra ny hampianatra ny mpikambana ao aminy mikasika ny fomba hafa amin’ny fambolena sy famokarana vary izy ireo izay tsy ialaina fandorana ny tany mba hanaovana tavy toy ny fambolena vary eny an-tanimbary izay ketsahina.
Rehefa avy eo dia nasain’ny tompon-tany tao amin’ny tànanà iray akaikin’ny valan-javaboahary izahay mba hanatrika ny fifanolozan-kevitra sy resadresaka izay nifanaovan’ireo zokibe tao an-tànàna. Nandritra ny fianalozan-kevitra izay nandraisany anjara dia nisy ireo vehivavahy anti-panahy vistivitsy izay naneho ny alahahelo ary nitaraina ny fitsipim-pandaminana izay napetraky ny governemanta mikasika ny fabololena netim-paharazana eny antoerana. Notantarain’izy ireo tamin’izay fa tonga tampoka teny an-toerana ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fanjakana ary nadrara azy ireo amin’ny fitrandrahana ny ala sy ny tokony hanajanona ny tavy ary indrindra indrindra nanamafy ny amin’ny tokony hiarovana ny tontolo iainana sy ny ala.
Nifandray sy nihaona ihany koa tamin’i Dr. Norman Uphoff, mpahay siansa ara-tsosialy avy any Cornell University, izahay izay nanome fanampim-panazavana sy nampahalala anay ny kolontsaina sy ny tantaran’ny vahoaka Malagasy amin’ny ankapobeny. Nazavainy ihany koa ny antony mahatonga ny mpoina manohitra sy tsy mazoto amin’ny fanajanonana ny fitradrahana be loatra ny ala sy ny resaka fanovana ireo fomba fambolena nentim-paharazana. Fotoana fohy taorian’izany dia nitafatafa niaraka tamin’i, Dr. Patricia Wright, izay » primatologist « avy any Stony Brook University, izay efa hatry ny ela no nanana fifandraisana manokana amin’i Madagasikara. Resaka mikasika ireo zavamaniry sy biby tsy manam-paharoa eto Madagasikara moa ny voton-dresaka nifanaovany, ary indrindra ny mikasika ireo gidro/varika izay mitady ho lany tamingana. Ary nofarainanay tamin’ ny resadresaka niaraka tamin’i Dr. Hal Needham avy any Louisiana State University moa ireo fifanakalozan-kevitra isan-karazany. Ity farany moa dia nanazava ny antony sy ny mety ho voka-dratsin’ny fiakaran’ny marim-pàna noho ny fiovan’ny toetr’andro.
**Izay aloha ny androany fa dia hotohizana tsy ho ela ny fandikana ny bilaogy izay nosoratan’izy mivady.**
About Fabiola Holiniaina Kjeldgaard
Teratany Malagasy ny tenany ary miasa sy monina any Wasghinton D.C. Niasa ary lehibe teo anivon’ny sehatry ny fizahan-tany izy. Niatomboka tamin’ny fitondrana ireo mpizaha tany tamina sambo mandritra ny 3 andro izany teny amin’ny Lakandranon’ny Pangalana iny. Tao aorian’izay dia lasa mpitondra mpizaha tany matihanina izy ary nitondra ireo mpizaha tany nitety an’i Madagasikara. Tao aorian’izany dia nanokatra orinasa mpitondra momba ny fizahan- tany izy. Fabiola ihany koa dia manana traik’efa sy fahalalana ny antony mahatonga ny fizahan-tany ho tsy afa-misaraka amin’ny resaka fiarovana ny tontolo iainana aty Madagasikara. Ankoatr’izany dia liana ary marisika tokoa izy tamin’ny resaka fampandrosoana ary niara-niasa tamina fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana izay niasa teny anivon’ny fahasalamana tany ambanivohitra ary ihany koa nanampy ireo ankizy kamboty sy sahirana mba hahita olona malala -tanana hanampy azy ireo teo amin’ny lafiny fianarana.
View all posts by Fabiola Holiniaina Kjeldgaard →
Ny tsiambaratelon’ireo Baobab na Renala
fanabeazana, fitsidihana toerana
Fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ilay tetik’asa « Pet Lemur survey »
Mpikambana ato amin’ny LCN mandritra ity volana ity : Planet Madagascar